लकडाउन एकैपटक यति धेरै लम्ब्याउँने तर यस्तो मोडलमा खुकुलो बनाउँने [भिडियोसहित] « Janaboli
लकडाउन एकैपटक यति धेरै लम्ब्याउँने तर यस्तो मोडलमा खुकुलो बनाउँने [भिडियोसहित]
काठमाडौ । सरकारले लकडाउन एकैपटक धेरै लम्ब्याउने निर्णयको तयारीमा छ । लकडाउन एकैपटक लम्ब्याउने घोषणा गर्ने र नागरिकको जीवनशैलीमा सहज हुनेगरी खुकुलो बनाउँने मोडल तय गरिने निश्चित भएको हो । यसैले २० जेठमा लकडाउनको अर्को चरण शुरु हुने निश्चितप्रायः छ । तर, यसपटक लकडाउनको नयाँ मोडालिटी रहने बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा नयाँ मोडालिटीमा कोरोना भाइरसविरुद्धको संघर्षमा जाने बताएका थिए । उनले उद्घोषले उद्योग, प्रतिष्ठान, नीजि कार्यस्थल खुल्न दिने र निर्माणका कार्य गर्न छुट दिइने उल्लेख गरेका थिए । कोरोनाविरुद्धको लडाईं लामो हुने भन्दै संघर्ष र आर्थिक गतिविधि सुरक्षाको उपाय अपनाएर गरिने बताएका थिए ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार सरकारले सार्वजनिक यातायात र शैक्षिक संस्था भने अझै केही समय बन्द गर्नेछ । तर, शैक्षिक कार्यक्रमको विकल्पका रुपमा अनलाइन र दुर शिक्षा शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
उद्योगहरु संचालन हुनेछन् । त्यसका लागि भने सम्बन्धित उद्योगीले सुरक्षाको वातावरण मिलाउनुपर्नेछ । कृषि कार्य गर्न छुट नै छ ।
विशेषगरी विदेशमा रहेका अलपत्र नेपालीको उद्धार गरी रोजगारीमा लगाउने सरकारको तयारी छ । उनीहरुलाई निर्माण क्षेत्रमा लगाउने तयारीका साथ सरकार लागेको छ । कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा निर्माण कार्यलाई गति दिने सरकारको तयारी देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठुला आयोजनाहरुले पनि गति लिनेछन् ।
देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण निकै बढ्न थालेपनि लकडाउनले जनताको दैनिक जीवन नै मुश्किल भएपछि सरकारले आर्थिक गतिविधि निश्चित मापदण्ड तोकेर गर्न दिन लागेको हो । यस्तो अवस्थामा नीजि तथा सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठान वा रोजगारसम्बन्धित कार्य स्थल खुल्नेछन् । होटल, रेष्टुरेण्ट वा मनोरञ्जनका क्षेत्र जहाँ धेरै मानिसको जमघट हुन्छ त्यस्ता स्थान भने अझै खुल्नेछैनन् । अब आफ्नो नीजि सवारी लिएर हिँडडुल गर्नेलाई प्रहरीले बाटोमा रोक्नेछैन । अस्पतालहरु कोरोना संक्रमितले भरिदै गएपछि सरकारले घरमै आइशोलेशनमा रहने गरी व्यवस्था समेत गर्न लागेको छ ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।
नेपालमा आज एकैदिन ७४० जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमित सं‌ख्या १५ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । शुक्रबार नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) का संक्रमित फेला परेको
ओली-प्रचण्ड वार्ता सकारात्मक, भोलि फेरि बस्ने
काठमाडौ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वयसहितका नेताहरूबीचको वार्ता सकिएको
विदेशी हस्तक्षेप बन्द गर, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रो भन्दै ओलीका पक्षमा प्रदर्शन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा स्थानीय सूर्यविनायकमा आज जनप्रदर्शन गरिएको छ । स्वतन्त्र
गुल्मीमा बाढी सहितको पहिरो बस्तीबाट खस्यो : दुई जना बेपत्ता, एक जनाको ६ घण्टापछि उद्धार
गुल्मी । गुल्मीमा बाढी र पहिरोका कारण दुई जना बेपत्ता भएका छन् । इस्मा गाउँपालिका
स्नातकोत्तर तहको नतिजा भर्खरै प्रकाशित : अनलाईन नतिजा हेर्ने तरिकासहित
त्रिविको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
त्रिविको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [सूचनासहित]
लामो समयदेखि कायममुकायम प्रमुखको भरमा विश्वविद्यालय
नेपालमा कृषि अध्ययनमा के–के छन् अवशर : कहाँ कुन तहमा के–के पढाई हुन्छ ?
नेपाल जर्निलाई मन्त्रीको साथ, श्रेष्ठको पहलमा चितवनमा बन्नेभयो आधुनिक पुस्तकालय
एम्बुलेन्स खरिद गर्ने अभियानका लागि आउँन थाल्यो सहयोगको ओइरो
गाउँमा एम्बुलेन्स पुग्ने भएपछि खुःशी हुँदै धमाधम गर्न थाले सहयोग
एम्बुलेन्स खरिदका लागि उत्साहित हुँदै सबैतिरबाट दिल खोलेर सहयोग
एम्बुलेन्स खरिदका लागि अमेरिकाबाट आयो यति ठुलो सहयोग, थप गर्ने प्रतिवद्धता
त्रिविका परीक्षापनि रद्ध, एसईई कै जसरी आन्तरिक मूल्यांकनबाट अंक दिएर नतिजा प्रकाशित
अनलाइनबाट परीक्षा लिनेसम्बन्धि त्रिविको अति जरुरी सूचना
लकडाउनका कारण स्थगित परीक्षाबारे त्रिविले फेरि जारी गर्यो यस्तो महत्वपुर्ण जानकारी
सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ८३१/074-75
संचालक / सम्पादक : इन्द्र प्रसाद आचार्य